Ejipta · Marsa, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Ejipta · Marsa, 2012
Tantara mikasika ny Ejipta tamin'ny Marsa, 2012
Ejipta: Ny Totoafon'i Abou Ismail Aminà Saribe
Fifidianana 27 Marsa 2012
Mafotaka tokoa ny fiomanana amin'ny fifidianana izay ho filoha ao Ejipta, voaomana hatao ny 23 sy 24 May 2012, miaraka amin'ny sariben'ireo mpirotsaka izay efa mameno ny làlana sahady. Saingy rehefa i Hazem Salah Abou-Ismail no resahana, dia tena vereziny lavitra any aoriana ireo mpifaninana rehetra amin'ny fanaovana totoafo ny fametahana saribe. Ny saribeny dia saika hita eny rehetra eny. Noararaotin'ireo mpiondana aterineto ilay fotoana mba hihomehezana avy amin'ilay totoafo an-tsary.
Bahrain 23 Marsa 2012
Fivavahana 21 Marsa 2012
Tontolo Arabo: Fisaonana Ny Nahafatesan'i Anthony Shadid
Arabia Saodita 21 Marsa 2012
Tamin'ny 17 Febroary 2012, nanohina ny fon'ny mpamaky ny vaovao maneran-tany ny naheno vaovao mampalahelo mikasika ny nahafatesan'ilay Solontenan'ny New York Times any amin'ny faritra Atsinanana afovoany tao Syria, Anthony Shadid teo amin'ny faha 43 taona. Araka ny tatitra voaray dia vokatry ny fahasemporana mahery nohon'ny tsy fahazakany manatona akaiky soavaly no nahatonga izany.
Ejipta: Mandria Am-piadanana Papa Shenouda III
Fivavahana 19 Marsa 2012
Matroka tanteraka ny filentehan'ny masoandro tao Ejipta omaly [asabotsy] – Nodimandry tamin'ny faha-89 taonany rehefa niady mafy tamin'ny aretina nandritra ny fotoana maharitra Pope Shenouda III. Taorian'ny fandrenesana ny vaovao mampalahelo dia an'arivony no nizotra nankany amin'ny Katedhraly Abbaseya haneho fiaraha-miory sy fanajana. Taorian'ny fanambarana ny fahafatesany dia niely tato...
Tontolo Arabo: Vahao i Clooney!
Afrika Mainty 18 Marsa 2012
Nosamborin'ny Etazonia ilay mpisehatra George Clooney sy ny rainy Nick nandritra ny fihetsiketsehana teo an-tokotanin'ny Ambasady Sodaney ao Washington DC. Mpisera Arabo namoaka izay niseho tamin'ny fihetsiketsehana nandritra ny fisamborana tao amin'ny Twitter. Natao ny fihetsiketsehana mba hanairana ny sain'ny olona manoloana ny krizy mitatao amin'ny vahoaka ao amin'ny fari-tendrombohitra Nuba, ao...
Ejipta: Hevitra Mifamahofaho Momba Ny Tolo-dalàna Fandraràna Ny Resa-betaveta
Fahalalahàna miteny 16 Marsa 2012
Iray volna minja taorian'ny fivoriana voalohan'ilay parlemanta vao voafidy tao Ejipta dia betsaka ny adihevitra sy fifanoheran-kevitra miraradraraka. Na ny tontolon'ny bilaogy na ny ao amin'ny Twitter Ejiptiana dia samy mibanjina avokoa ilay parlemanta vaovao, mibitsika ny fangatahan-dry zareo, ny ahiahy sy ny esoeso eo ambanin'ny tenifototra #EgyParliament. Ny fivoriana vao haingana nataon'ny parlemanta dia niteraka fifanakalozan-dresaka be mihitsy, saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia nikasika ny resa-betaveta!
MENA: Sarimihetsika Salafista Sahala Amin'Inona no Hojerenao?
Bahrain 08 Marsa 2012
“Ny zavakanto rehetra dia vokatry ny fotoana namoronana azy, ary mitaratra io fotoana io raha tiany ilay izy na tsia, eny fa na dia miezaka ny hitsoaka izany aza izy ka miafina anaty nofinofy,” hoy ny nosoratan'i Stephen Whitty. Ary tsy hafa amin'izany ny sarimihetsika eto, ary ny anarany dia...